Football Khabar » आफ्नो ‘कमजोर प्रदर्शन’बारे बोले मेस्सी !
आफ्नो ‘कमजोर प्रदर्शन’बारे बोले मेस्सी !
लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । गत राति क्वार्टरफाइनल खेलमा भेनेज्वेलालाई २–० ले हराउँदै अर्जेन्टिना सेमिफाइनल पुगेको हो । अब अर्जेन्टिनाले सेमिमा प्रतियोगिताको आयोजक टिम ब्राजिलसँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्दैछ ।
जारी प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनालाई पनि उपाधि दाबेदार टिम मानिएको छ । विश्व फुटबलका सुपरस्टार मेस्सीले कप्तानी गरेको टिम अर्जेन्टिना सेमिफाइनलसम्म पुग्दा उत्कृष्ट लयमा छैन । तर, उपाधिको बोटामा भने छ । उसले सेमिसम्म पुग्दा चार खेल खेल्दा दुई खेल जितेर एक खेल बराबरी गरेको छ भने एक खेलमा पराजय भोगेको छ ।
जारी प्रतियोगितामा अर्जेन्टिनी कप्तान मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । स्पेनिस बार्सिलोनाबाट अक्सर उत्कृष्ट लयमा देखिने उनी ब्राजिलमा लयहीन देखिएका छन् । चार खेल खेलेर टिम सेमिफाइनल पुग्दासम्म मेस्सीले आफ्नो असली भर्सन देखाउन सकेका छैनन् । उनले जम्मा १ गोल मात्र्र गर्न सकेका छन्, त्यो पनि पेनाल्टीबाट ।
अहिले अर्जेन्टिना सेमिफाइनल पुगेसँगै मेस्सीको कमजोर प्रदर्शनले अर्जेन्टिनी समर्थकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । संसारभरका मेस्सीका करोडौं फ्यानहरू पनि मेस्सीको सामान्य प्रदर्शनाट खुसी हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई अझै पनि आशा छ– सेमिफाइनल र फाइनलमा मेस्सीले उच्च प्रदर्शन गर्नेछन् र टिमलाई उपाधि जिताउन योगदान दिनेछन् ।
गत राति भेनेज्वेलामाथि २–० को जित निकाल्दा पनि सामान्य प्रदर्शन गरेका मेस्सीसँग खेलपछि मिडियाले प्रतिक्रिया मागे । मेस्सीलाई उनको कमजोर प्रदर्शन र सेमिफाइनलबारे सोधिएको थियो । जसमा उनले सटिक जवाफ दिए । सोक्रममा मेस्सीले ब्राजिलमा आफ्नो सोचेजस्तो प्रदर्शन हुन नसकिएको कुरा स्वीकारे ।
‘यो साँचो हो कि, मैले मैले कोपा अमेरिकामा राम्रो गर्न सकिरहेको छैन । जस्तो मैले अपेक्षा गरेको थिएँ वा हाम्रा फ्यानहरूले अपेक्षा गरेका थिए, त्यो हुन सकेको छैन,’ मेस्सीले खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘तर, म धेरैथोरै टिमलाई सघाइरहेको छु । प्रतियोगितामा रहँदासम्म टिमको जित नै ठूलो कुरा हो ।’
त्यसैगरी, मेस्सीलाई सेमिफाइनलमा ब्राजिलसँग हुने खेलबारे पनि सोधिएको थियो । सो विषयमा बोल्दै मेस्सीले सेमिफाइनल प्रतियोगिताभरिकै सबैभन्दा कठिन खेल हुने बताए । उनले दुवै टिम जितको भोको रहेको भन्दै नतिजा जे पनि हुनसक्ने बताए । मेस्सीले सेमिफाइनलमा दुवैका लागि बराबरी सम्भावना रहेको पनि बताए ।
‘हामी ब्राजिलको सम्मान गर्छौं । उनीहरू आफ्नो घरमा यो प्रतियोगिता खेल्दैछन् । उनीहरू निकै राम्रो लयमा छन् । उनीहरू हामीविरुद्ध जितको मात्रै हैन, उपाधिकै दाबेदार छन्,’ मेस्सीले भने, ‘तर, हामी पनि च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य लिएर यहाँ आएका छौं । उपाधि हाम्रो एक मात्रै बिन्दु हो । तर, त्योभन्दा पहिला हामीले एक बलियो टिमलाई हराउनुपर्छ । हामी यसमा केन्द्रित हुनेछौं ।’
ब्राजिल र अर्जेन्टिना दुवै यस प्रतियोगितामा उपाधि दाबेदार टिम हुन् । त्यसमा पनि ब्राजिल घरेलु टोली र उत्कृष्ट टिम खेलाडीको सेट भएकाले उसलाई धेरैले प्रमुख उपाधि दाबेदार टिम मानेका छन् । अब ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको सेमिफाइनल खेल जुलाई ३ तारिखमा हुँदैछ । अर्को सेमिफाइनल खेलमा चिलीविरुद्ध उरुग्वे वा पेरुले खेल्नेछ । अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेलमा आज उरुग्वे र पेरु खेल्दैछन् ।
प्रकाशित मिति १४ असार २०७६, शनिबार ०९:५५